Ny toeram-pitrandrahana nataon'i Solomona Mpanjaka (tapany 14), ny Fiangonan'Andriamanitra Switzerland (WKG)
Ny toeram-pitrandrahana nataon'i Solomona <abbr> (fiz. 14)
Tsy afaka ny hieritreritra an'i Basil aho rehefa namaky ny Ohabolana 19,3. Manimba ny fiainany noho ny hadalany ny olona. Ka maninona no omena tsiny foana ity Andriamanitra ity? Basil? Iza no basil Basil Fawlty no mpilalao fototra amin'ny fampisehoana tantara mahatsikaiky anglisy izay tena mahomby amin'ny Fawlty Towers ary nilalao an'i John Cleese. Basil dia lehilahy saro-pady, tsy mahalala fomba, paranoid, izay mitety trano fandraisam-bahiny iray ao amin'ny tanàna amoron-tsiraka ao Todquay any Angletera. Misarika ny fahatezerany amin'ny hafa izy amin'ny alàlan'ny fanamelohana azy ireo ho an'ny hadalany. Matetika i Manuel waiter, Espaniola, ilay mpihaza Espaniola. Miala tsiny amin'ity. Avy any Barcelona izy. Nanameloka azy ho an'ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra i Basil. Amin'ny toe-javatra iray, very tanteraka ny nerveo i Basil. Mandoro izany ary mitady ny lakilasy i Basil mba hampivadika an-jotra ny afo fanairana, fa diso ny fanalahidy. Tsy olona na zavatra tahaka ny mahazatra Miala tsiny (tahaka ny fiarany) ilay toe-javatra, dia nametaka ny totohondriny tamin'ny lanitra izy ary niantsoantso tamim-pitandremana Misaotra an'Andriamanitra! Misaotra betsaka anao! Tahaka an'i Basil ve ianao? Manameloka anao amin'ny hafa ve ianao ary na Andriamanitra aza raha misy zavatra ratsy mitranga aminao?
Azonao atao ny manohy ity lisitra ity araka izay tianao. Fa zavatra iray iraisan'izy ireo daholo ihany: ny hevitra hoe ianao irery no olon-dratsy tsy manan-tsiny. Ny fanamelohana ny hafa amin'ny zava-dratsy dia tsy ny olan'ny Basil ihany - fa tafiditra ao anatin'ny toetrantsika koa ary tafiditra ao anatin'ny fianakavianay. Rehefa manome tsiny ny hafa isika dia manao izay nataon'ny razantsika ihany. Rehefa tsy nankatò an'Andriamanitra izy ireo, dia nanome tsiny an'i Eva sy Andriamanitra i Adama, ary mbola nanameloka foana i Eva (Eksodosy 1, 3-12).
Raha afaka ny ho tonga toa an'Andriamanitra aho, dia lavorary aho. Izaho no ho tsara indrindra ary hanana fifehezana tanteraka ny fiainako sy ny zavatra rehetra manodidina ahy! Adama sy Eva latsaka an-davitr’i Satana. Tsy miraharaha ny didin 'Andriamanitra izy ireo ary mihinana ny voankazo voarara ao anaty zaridaina. Nambaran'izy ireo tamin'ny lainga ny fahamarinan'Andriamanitra (Rom 1,25). Mahatalanjona azy ireo ny fahatsapan'izy ireo fa zava-drehetra izany. Ratsy kokoa - latsaky ny minitra vitsy monja izy ireo. Na dia voahodidin'ny fitiavan'Andriamanitra aza tsy manam-petra izy ireo, very ny fahatsapana ho tiana. Menatra izy ireo, menatra ary tratry ny fanamelohana. Tsy vitan'ny hoe tsy nankatò an'Andriamanitra izy ireo, nefa takany fa tsy tonga lafatra ary tsy mahafehy na inona na inona - feno tanteraka izy ireo. Ireo mpivady, izay tsy mahazo aina intsony eo amin'ny hodiny ary feno ny haizina ao anaty haizina, dia mampiasa ravina aviavy toy ny firakotra vonjy maika, mampiasa ravina aviavy toy ny akanjo vonjy maika ary manandrana manafina ny henatra amin'izy ireo. Tsy hampahafantariko anao fa tena tsy tonga lafatra aho - tsy hahita ny tena toetrako aho satria menatra an'io aho. Ny fiainany ankehitriny dia mifototra amin'ny fiheverana fa afaka ny tiana ihany izy ireo raha tonga lafatra.
Tena mahagaga tokoa raha mbola miady hevitra tahaka ny hoe "tsy misy vidiny ary tsy maninona aho"? Ka izany no nahazoanay azy. Ny fahazoan'i Adama sy Eva hoe iza Andriamanitra ary iza no nampifangaro azy. Na dia nahalala an’Andriamanitra aza ny olona dia tsy te hivavaka na tsy hisaotra azy akory Andriamanitra. Nanomboka nanao hevitra tsy misy dikany momba an'Andriamanitra kosa izy ireo, ary nanjary maizina ny sainy ary lasa nisavoritaka (Romana 1,21 Baiboly Fiainana Vaovao). Toy ny fako misy poizina natsipy tao anaty renirano iray io, io lainga io sy izay nentiny dia niparitaka sy nandoto ny olombelona. Mbola amboarina hatramin'izao ny ravina aviavy mandraka androany.
Inona no azontsika atao? Noraisiko tato ho ato ny fanalahidin'ny fiara. Nijery teo am-paosiko aho, tao amin'ny efi-trano rehetra tao an-tranonay, tamin'ny drawers, tamin'ny tany, isaky ny zoro. Mampalahelo fa tsy menatra aho ny miaiky fa nanameloka ny vadiko sy ny zanako aho noho ny tsy fisian'ireo fanalahidy. Na izany aza, mandeha tsara daholo ny zava-drehetra, manana ny fifehezako ny zava-drehetra aho ary tsy misy na inona na inona! Farany, hitako ny fanalahidiko - tao anatin'ny hidin-tsetran'ny fiara nataoko. Na manao ahoana na manao ahoana no hitadiavako azy ireo, dia tsy ho nahita ny lakilen-kozatra tao an-tranoko na ny fananan'ny fianakavianay akory aho, satria tsy teo izy ireo. Raha mitady ny antony mahatonga ny olantsika amin'ny hafa isika dia zara raha mahita azy ireo. Satria tsy ho hita ao. Matetika izy ireo ary mihetsika ao anaty ao anatiny.Ny hadalan'ny olona no mandiso azy, fa ny fony kosa misafoaka amin'i Jehovah (Ohabolana 19, 3). Ekeo izany raha manao hadisoana ianao ka mandray andraikitra! Ny zava-dehibe indrindra dia andramo ny hitsahatra tsy ho olona tonga lafatra izay heverinao fa ianao. Ajanony ny finoana fa ho ekena sy tiana fotsiny ianao raha olona tonga lafatra. Raha sendra fahotana dia very ny tena toetrantsika isika, fa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy dia maty ny lainga feno fitiavana tsy manam-paharoa. Aza mino io lainga io, fa minoa fa mifaly aminao Andriamanitra sy manaiky anao ary tia anao tsy misy fepetra - tsy tsapanao akory ny fihetseham-ponao, ny fahalemenao ary ny hadisoanao koa. Miantehitra amin'ity fahamarinana fototra ity. Tsy mila manaporofo na inona na inona amin'ny tenanao na amin'ny hafa ianao. Aza manome tsiny ny hafa. Aza atsofoka.
COPYRIGHT © 2020 | NY FIVORIANA AN'ANDRIAMANITRA (SWITZERLAND) | CONTACTS | LEGAL NOTES | Fitsipika | MAIL